कोरियाली भाषा परीक्षाको टुङ्गो लागेन, तयारीमा जुटेका युवा अलमलमा - नेपालबहस
अशोक घिमिरे : रासस
| १८:२२:४९ मा प्रकाशित
१८ पुष, काठमाडौं । कोरियाली भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने टुङ्गो नलाग्दा परीक्षाको तयारीमा जुटेका युवा अलमलमा परेका छन् । आकर्षक रोजगारीको गन्तव्यका रुपमा रहेको दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली ‘इपिएस’ मार्फत नेपाली कामदार लैजाँदै आएको थियो । परीक्षा कहिले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा परीक्षाको तयारी गरेका युवामा भने निराशा छाएको छ ।
कोरियाले प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुने नेपाली युवालाई त्यहाँ रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । कोरियाले अझै पनि भाषा परीक्षा कहिले गर्ने भनेर टुङ्ग्याउन सकेको छैन । यस्तै परीक्षा प्रणालीका बारेमा पनि निक्र्योल हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा पनि भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन । गत वर्ष भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन नसके पनि यस वर्ष ‘सन् २०२१ मा’ परीक्षा सञ्चालन गर्ने मौखिक जानकारी आएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । कोरियाले भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भने पनि कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट पारेको छैन ।
“भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछौँ भन्ने जानकारी आएको छ”, शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमले भने, “लिखित पत्राचार तथा छलफल भएर यो समयमा परीक्षा गर्ने भन्ने तोकिएको छैन ।” यसघि सन् २०१२ मा पनि भाषा परीक्षा रोकिएको थियो । यद्यपि कोरियाले सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासमै भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
कोरियाले यसपटकदेखि ‘कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट’ ‘सिबिटी’ परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । यसअघि ‘पेपर बेस्ड टेस्ट’ ‘पीबीटी ‘ परीक्षा हुँदै आएको थियो । यसपटकदेखि पीबीटी नगरी सिबटी परीक्षा गर्ने जानकारी आएको उनले बताए । “पीबीटी नगरी सीबीटी परीक्षा गर्ने औपचारिक निर्णय भइसकेको अवस्था होइन्”, निर्देशक गौतमले भने, “पीबीटी परीक्षामा पनि डेस्कटपभन्दा पनि ‘ट्याब’बाट अनलाइन परीक्षा लिने गरी तयारी गरिएको बुझिएको छ ।”
कोरियाली पक्ष सीबीटी परीक्षाका लागि सफ्टवेर निर्माणमा जुटेको छ । सफ्टवेयरको परीक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । परीक्षा भवन निर्माणको काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोरियाली टोली आएर अनलाइन परीक्षाको सम्भाव्यता हेर्ने काम भइरहेको छ । अबदेखि पीबीटी परीक्षा नगर्ने कोरियाली पक्षले स्पष्ट पारिसकेको छ । “यो मितिमा परीक्षा गर्ने भन्ने छैन तर अब परीक्षा हुँदा ट्याबबाटै हुने कुरा छ”, उनले भभने, “त्यहीअनुसारको पूर्वाधार तयारीको काम चल्दै छ, सिबिटीबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।”
कोटा छुट्टयाउन बाँकी
दक्षिण कोरियाले सन् २०२१ मा विभिन्न १६ मुलुकबाट ५२ हजार आप्रवासी कामदार लिने घोषणा गरेको छ । कोरोनाका कारण कोरियाले गतवर्षको तुलनामा चार हजार कम विदेशी कामदार लिन लागेको बताइएको छ । कोरियाले गत वर्षको तुलनाका आप्रवासी कामदारको कोटा केही कटौती गरेको भन्ने खबर सावर्जनिक भए पनि औपचारिकरुपमा इपिएस कोरिया शाखालाई जानकारी आएको छैन । देशगतरुपमा कामदारको कोटा बाँडफाँड गरेर अहिलेसम्म नपठाएको निर्देशक गौतमले जानकारी दिए ।
कोरोनापछि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोष्टरमा रहेका युवा कोरिया जाने क्रम रोकिएको छ । “कोभिड–१९ पछि नेपाली पठाउने क्रम रोकिएको छ”, उनलेभने, “नेपाल तथा कोरियामा पनि ‘लकडाउन’ थियो, हवाई उडान बन्द थियो, त्यही कारण जान बन्द भएको हो ।” लकडाउन हटेर हवाई उडान नियमित भएपछि रोष्टरमा रहेका युवालाई कोरिया पठाउन पहल गरिरहेको उनले बताए ।
कोरियाले कोभिड पछाडि आफ्नो मुलुकमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी नियम परिवर्तन भएकाले सोहीअनुसार कामदार पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । “कोरोना बीमा, हवाई उडान, क्वारेन्टाइन, ४८ घण्टाभित्रको कोरोना परीक्षण रिपोर्टलगायत शर्त पूरा गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेर पत्र आएको छ”, उनले भने, “हामी सबै विषय सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर पत्राचार गरिसकेका छौँ, तर कोरियाबाट स्पष्ट जानकारी आएको छैन ।”
नेपालले भाषा परीक्षा पास भएका सबै युवालाई रोजगारीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न कोरियासँग आग्रह पनि गरेको छ । “पास भएका सबै युवा कोरिया जाऊन् भन्ने हो”, निर्देशक गौतमले भने, “तर कोरियासँग भएको श्रम समझदारीको अवस्थाले त्यो देखिँदैन ।” कोरियासँगको श्रम समझदारी नवीकरणका समयमा नेपालले उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न औपचारिक आग्रह गर्ने पनि बताइएको छ ।
सन् २००८ देखि हालसम्म भाषा परीक्षा उतीर्ण गरी ६२ हजार ८५२ पुरुष र चार हजार २० महिला गरी कुल ६६ हजार ८७२ युवा कोरिया गइसकेका छन् । कोरोना महामारीका बीच सन् २०२० मा एक हजार २७ जना कोरिया पुगेका छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोष्टरमा रहेका युवा जाने क्रम हुँदाहुँदै नेपालमा लकडाउन शुरु भएको थियो । अझै पनि भाषा परीक्षा पास गरे रोष्टरमा रहेका १२ हजार युवा कोरिया जाने प्रतीक्षामा छन् । तीमध्ये छ हजार हाराहारी छनोटमा परिसकेका छन् ।
रोष्टर अवधि दुई वर्षको हुन्छ । दुई वर्षभित्र कोरियाली रोजगारदाताले छनोट गरेनन् भने उनीहरु कोरिया जान पाउँदैनन् । कोरियाले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालबाट कामदार लैजाँदै आएको छ । नेपालबाट वार्षिक औषत आठ हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा कोरिया जाने गरेका छन् । सन् २०१९ मा सात हजार १३६ नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया गएका थिए । हाल कोरियामा लगभग ३१ हजार नेपाली कार्यरत रहेका छन् ।
आजदेखि एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान शुरु २९ मिनेट पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? ४० मिनेट पहिले
भोजपुरमा एक हजार ३३५ लाई खोप दिइने १० घण्टा पहिले
सरकारद्धारा मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक [ हेर्नुस सूचीसहित ] ११ घण्टा पहिले
पहिलो दिन ९ हजारले लगाए खोप, स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नता उत्साहजनक ११ घण्टा पहिले
देशभर २८३ कोरोना संक्रमित थपिए १३ घण्टा पहिले
डोटीका फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने एक हजारले खाेप लगाउने १४ घण्टा पहिले
जुम्लाको गोठीगाउँमा आगलागी हुँदा ३० घर जलेर नष्ट ! २३ घण्टा पहिले
नेपालमै पहिलो पटकः क्याल्सियम भरिएको मुटुको नशाको बिना शल्यक्रिया उपचार १४ घण्टा पहिले
नेप्सेमा तीन कम्पनीको ८२ लाख कित्ता बोनस शेयर सूचिकृत १६ घण्टा पहिले
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले नगद लाभांश पठायो शेयरधनीको बैंक खातामा १९ घण्टा पहिले
यस वर्ष हिउँद याममा हिमपात र पानी नपर्दा किसान चिन्तित १५ घण्टा पहिले
राष्ट्रपति बाइडेनले शपथग्रहणमा लगाएको घडीको मूल्य आठ लाख ३ दिन पहिले
सेटिङको खेती ३ दिन पहिले
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा कांग्रेस १६ घण्टा पहिले
भारतमा गणतन्त्र दिवसका दिन किसानहरुको ट्याक्टर र्याली २ दिन पहिले
सरिया हिमवर्तीकाे २० डिग्री सेन्टिग्रेडको सिरेटोमा नेपाली शान्ति सैनिक ७ दिन पहिले
प्रमोद खरेल फुल सम्झेर रोए २ दिन पहिले
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक : डा. महत २ हप्ता पहिले
सिटिजन्स बैंक र साम्बाला होटलबीच सम्झौता ४ हप्ता पहिले
एनसेलका स्थानीय साझेदार : करोडमा शेयर हात पारेर अर्बौ कर छली ! ३ हप्ता पहिले
नक्कली पीसीआर रिर्पोट बनाएर विदेश उड्दै, एयरपोर्टबाट ७ जना पक्राउ ४ हप्ता पहिले
मन्त्रालयले भन्याे, अनावश्यक रुपमा कोभिड-१९ को परीक्षण नगर्नु ३ हप्ता पहिले
चीन पुगेपछि डब्ल्यूएचओका विशेषज्ञ टोली क्वारेन्टाइनमा २ हप्ता पहिले
आज नेपाल–इजरायलबीच ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर हुने ७ दिन पहिले
टीकापुर अस्पतालबाट खोप अभियानको प्रारम्भ १४ घण्टा पहिले
ललितपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट’ बत्ती २ वर्ष पहिले
पाकिस्तानमा इद मनाउनका ६ दिन विदा ! ८ महिना पहिले
गच्छेभन्दा बाहिर गएर तडकभडक नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह १ वर्ष पहिले
सन्दीप लामिछाने १ लाख पाउण्डमा बर्मिङ्घममा अनुबन्धित १ वर्ष पहिले